Kooxda tifaftirka ee Economia Finanzas | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Dhaqaalaha Dhaqaalaha waa degel ku dhashay 2006 ujeeddo cad oo ah: in la daabaco run, qandaraasle iyo macluumaad tayo leh oo ku saabsan adduunka dhaqaalaha iyo maaliyadda. Si loo gaaro ujeeddadan waxaa lagama maarmaan ah in la helo koox tifaftireyaal ah oo khabiir ku ah hawsha isla markaana aan wax dhib ah ku qabin inay runta u sheegaan sida ay tahay; dano madoow ama wax lamid ah malahan.
Dhaqaalaha dhaqaalaha waxaad ka heli kartaa macluumaad aad u kala duwan oo ka soo jeeda fikradaha aasaasiga ah sida maxay yihiin VAN iyo IRR kuwa kale oo aad u kakan sida tilmaamaheena si aan ugu badino maalgashigaaga si guul leh. Dhammaan mawduucyadan iyo kuwo kale oo badanba waxay ku leeyihiin boos boggeena internetka, sidaa darteed haddii aad rabto inaad soo ogaato wax kasta oo aan ka hadalno, waxa ugu fiican ayaa ah gal qeybtaan halkaasoo aad ku arki doontid liis dhammaystiran oo ah dhammaan mawduucyada la daboolay.
Kooxdayadu waxay daabaceen boqolaal maqaal oo ku saabsan dhaqaalaha, laakiin weli waxaa jira mowduucyo kale oo badan oo laga hadlayo. Haa ma rabtaa inaad ku soo biirto degelkeena oo ka mid noqo kooxdayada qorayaasha ah ee ay tahay inaad iska xaadiriso buuxi foomkan waana kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Dhaqaalaha ayaa ah wax na xiiseynaya laga bilaabo daqiiqadda ugu horreysa ee aan la macaamilno sidii aan nolol maalmeedkeenna ula soo bixi lahayn. Si kastaba ha noqotee, kama baranno aqoontaan badan, sidaa darteed waxaan jeclahay inaan ka caawiyo dadka kale inay fahmaan fikradaha dhaqaalaha oo aan siiyo talooyin ama fikrado lagu hagaajiyo keydinta ama lagu gaaro
Waxaan maalgashi ku sameynayay suuqyada muddo sanado ah, runtii hal sabab ama mid kaleba dunida maalgashiga ayaa i xiiseyneysay tan iyo markii aan ku jiray dugsiga sare. Dhammaan wejigan waxaan had iyo jeer ku koriyey khibrad, daraasad, iyo cusbooneysiin joogto ah oo ku saabsan dhacdooyinka. Ma jiraan wax aan aad ugu jecelahay oo aan ka hadlo dhaqaalaha.
Waxaan aad u jecelahay macluumaadka, iyo gaar ahaan dhaqaalaha iyo u gudbinta macluumaadkeyga dadka si ay si fiican ugu maareeyaan lacagtooda. Dabcan, hadaf iyo madax banaani, waxbadan baa ka maqnaan lahaa.
Jose Manuel Vargas sawir-haye
Waxaan aad u jecelahay dhaqaalaha iyo maaliyadda, sidaa darteed waxaan bilaabay mashruucan oo aan ka rajeynayo inaan ka sii wado barashada, iyo la wadaagista aqoontayda, anigoo la socda wax walba oo adduunkan ka socda.
Anigu waxaan jecelahay barashada cilmiga dhaqaalaha iyo maaliyadda, sidaa darteedna waxbarashadaydu waxay ku dhammaatay inay la xiriirto dhinacyadaas. Hamigeygu waa in aan gacan ka geysto in si siman loo qeybsado kheyraadka, oo ay tahay inuu noqdo ujeedka Dhaqaale ahaan Sayniska Bulshada.
Magacaygu waa Julio Moral waxaanan haystaa shahaadada cilmiga dhaqaalaha ee Jaamacadda Complutense University of Madrid. Hamigeyga weyn waa dhaqaalaha / dhaqaalaha iyo dabcan, adduunka xiisaha leh ee maalgashiga. Muddo sanado ah hadda, waxaan nasiib badan u yeeshay inaan nolol ka sameysto ka ganacsiga internetka.